S.Pellegrino Young Chef Academy Abaalmarinta Ayaa Lagu Dhawaaqay
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » S.Pellegrino Young Chef Academy Abaalmarinta Ayaa Lagu Dhawaaqay
Raadinta tayada ugu xiisaha badan ee loogu talagalay cunto kariyayaasha da'da yar ee adduunka, oo ay abuurtay S.Pellegrino Young Chef Academy si loo kobciyo mustaqbalka Gastronomy, waxay ku timid farxad aad u dhow fiidkii Sabtida 30th October. Inta lagu jiro Grand Finale of S.Pellegrino Young Chef Academy tartanka 2019-21, ka dib wareegyo cunto karis tartan ah, Jerome Ianmark Calayag, oo matalaysa UK iyo Waqooyiga Yurub Gobolka, ayaa lagu dhawaaqay inuu yahay ku guuleystaha S.Pellegrino Young Chef Academy Abaalmarinta 2019-21. Jerome wacdarihiisa "Khudaarta fudud" Saxeexa Saxeexa waxa uu uuraysatay iyada oo lala kaashanayo lataliyihiisii, David Ljungqvist, waxa uu la yaabay xeerbeegtida la qaddariyo ee la qaddariyo xulashada maaddooyinka, xirfaddiisa, xariifnimadiisa, quruxda saxanka iyo farriinta ka dambaysa saxanka, isaga oo garaacaya gelinta 9 kale oo cunto kariyayaal tayo leh oo adduunka ah.
Ku guuleysiga horyaalka sharafta leh, Jerome Ianmark Calayag ayaa taariikhda la galay Horyaalkii hore Mark Moriarty (2015), Mitch Lienhard (2016) iyo Yasuhiro Fujio (2018) laakiin, tan ugu muhiimsan, waxay u taagan tahay iftiin fursad ah marka uu bilaabayo safar dhiirigelinaya si uu gacan uga geysto qaabeynta gastronomy-ga berrito. Waxaa doortay S.Pellegrino Young Chef Academy Competition's Grand Jury oo ka kooban lix koox oo waaweyn oo gastronomy caalami ah - Enrico Bartolini, Manu Buffara, Andreas Caminada, Mauro Colagreco, Gavin Kaysen, Clare Smyth - Jerome ayaa soo jiitay guddiga kuwaas oo sidoo kale la dhacay heerka guud ee tartanka. Qoyska S.Pellegrino ayaa u mahadcelinaya Pim Techamuanvivit Kaas oo waayo-aragnimadeeda si wanaagsan wax ugu biirisay tartanka, heerarkiisii ​​kala duwanaa, oo xannibaadaha faafa awgeed aan awoodin inay u duusho Talyaaniga dhacdada Grand Finale.
Tartanka sanadkan ayaa la soo bandhigay saddex abaalmarino cusub taas oo dhamaystiraysa Abaalmarinta Akadeemiyada Da'da yar ee S.Pellegrino oo ka tarjumaysa aaminsanaanta S.Pellegrino iyo taageerada awoodda isbeddelka ee gastronomy iyo saameynteeda ka baxsan jikada. Elissa Abou Tasse, oo matalaysa Afrika iyo Bariga Dhexe, oo leh "beerta Aadan" waa ku guuleystaha Abaalmarinta Acqua Panna ee Isku xidhka Gastronomy, iyada oo la aqoonsanayo awoodda ay u leedahay in ay diyaariso Saxeexa Saxeexa ah oo ay ku jiraan maaddooyin muujinaya qaninimada asal dhaqameedkeeda oo ka tarjumaysa xiriirka qumman ee ka dhexeeya dhaqamada kala duwan. Callan Austin, oo ka yimid Afrika iyo Bariga Dhexe, oo leh "Shabakadda Ghost" ayaa helay Abaalmarinta S.Pellegrino ee Mas'uuliyadda Bulshada, ku meeleeyay Cunto Wanaagsan La Sameeyey Kusuggii soo bandhigay habka ugu wanaagsan ee mabda'a cuntada taas oo ka dhalatay dhaqamada mas'uuliyadda bulsheed. Ugu dambeyntiina, bulshada internetka ee Cunto Wanaagsan Lovers loo xilsaaray Cunno Fiican jecel Abaalmarinta Fikirka ilaa Andrea Ravasio sawirka meel hayaha, oo ka socda wadamada Iberian iyo Mediterranean-ka, oo ah cunto kariyaha da'da yar ee sida ugu wanaagsan u matalay caqiidadiisa shakhsi ahaaneed gudaha saxankiisa "El domingo del campesino" Saxeexa Saxeexa.
Tartanka Cunto karinta Da'da yar ee S.Pellegrino waa hawsha muhiimka ah ee S.Pellegrino Young Chef Academy mashruuc, oo uu bilaabay S.Pellegrino sannadkii hore, iyada oo ujeedadu tahay kobcinta mustaqbalka gastronomy-ga iyada oo la ogaanayo kartida da'da yar oo lagu xoojiyo iyaga qorshe waxbarasho, hagid iyo fursado khibradeed. Daabacaaddan Tartanku waxa ay ahayd mid ka wanagsan sidii hore, iyadoo la arkay codsade ka kala yimid adduunka oo dhan. 135 dhalinyaro ah Guuleystayaasha Gobolka S.Pellegrino Young Chef Academy Tartanku waxay yimaaddeen Grand Finale ka dib dariiqa hagitaan kaas oo ay ugu mahad naqeen taageerada Chef Sare, waxay awoodeen inay hagaajiyaan suxuunta saxeexa.
Munaasabada 3-da maalmood ah ayaa ku soo idlaatay casho sharaf gaar ah. Gastronomy Giant Massimo Bottura isaga iyo kooxdiisa - Takahiko Kondo, Riccardo Forapani, Francesco Vincenzi, Jessica Rosval iyo Bernardo Paladini. - Martidu ha la kulmaan ruuxa runta ah ee S.Pellegrino Young Chef Academy, deegaan ka samaysan karti, hal-abuur, hal-abuurnimo, xamaasad iyo xirfad shaqo. Massimo Bottura, isagoo ah Master of Xaflad iyo lataliye dhiirigelin leh, wuxuu garab istaagay shanta cunto kariyaha, si uu u abuuro shan waqti oo cunto karis ah oo gaar ah, mid walbana wuxuu koobayaa qaabka, ruuxa iyo taariikhda kooxdiisa.
Stefano Bolognese, Sanpellegrino International Business Unit: "Runtii aad ayaan ugu hanweynahay dhacdada Grand Finale ee na siisay fursad aan dib ugu xirno shaqsi ahaan iyo in aan aragno hibo cunto oo cajiib ah oo shaqada ku jirta, si aan u wada abuurno wax aan caadi ahayn. Haddaba waxaan u mahadcelinayaa dhammaan intii naga soo biirtay adduunka in ay nala wadaagaan xamaasadda saddexdan maalmood. Waxay ahayd yaab. Jerome run ahaantii wuxuu hor iftiimay xeerbeegtida qaaliga ah ee sharafta leh, iyo hambalyadayada ugu diirran isaga, isaga oo rajaynaya inuu keeno dareenkiisa iyo fekerkiisa miiska si uu uga caawiyo qaabeynta gastronomy ee berrito. Waxaan sidoo kale rabnaa inaan u mahadcelinno dhammaan kartida dhalinyarada, jilayaasha safarkan dhiirigelinta leh iyo horeyba xubnaha S.Pellegrino Young Chef Academy: waa bedelka ciyaarta mustaqbalka waxaana u rajeyneynaa nasiib wanaagsan iyo xirfad cajiib ah. Raadintayada hibada hal-abuurka ma joogsato mana sugi karno inaan ku dhawaaqno tafaasiil dheeraad ah oo ku saabsan daabacaadda soo socota ee tartanka Akadeemiyada Chef Young S.Pellegrino”.